IHotjar: Ubushushu, iiFunels, ukuRekhodwa, uhlalutyo kunye nengxelo | Martech Zone
Hotjar ibonelela ngeseti epheleleyo yezixhobo zokulinganisa, ukurekhoda, ukubeka iliso kunye nokuqokelela ingxelo kwiwebhusayithi yakho kwiphakheji enye efikelelekayo. Yahluke mpela kwezinye izisombululo, iHotjar ibonelela ngezicwangciso ngezicwangciso ezilula ezifikelelekayo apho imibutho inokuthi ivelise ulwazi kwi Inani elingenamkhawulo lewebhusayithi -Nokwenza ukuba ezi zinto zifumaneke kwi Inani elingenamkhawulo labasebenzisi.
Uvavanyo lweHotjar Uvavanyo lubandakanya
Ubushushu -Ukubonelela ngomfanekiso obonakalayo wokucofa kwabasebenzisi bakho, iimpompo kunye nokuziphatha okuskrola.
Ukurekhodwa kwabatyeleli -Rekhoda isimilo sabatyeleli kwindawo yakho. Ngokubona ucofa undwendwe lwakho, iimpompo, iintshukumo zeempuku ungachonga imiba yokusebenziseka kwi ﬂ y
Iifanele zokuguqula -Chonga ukuba leliphi iphepha kwaye leliphi inyathelo uninzi lweendwendwe oluyekayo ukuzibandakanya kunye nophawu lwakho.
Uhlalutyo lweFom -Ukuphucula ukugcwaliswa kweefom kwi-intanethi ngokufumanisa ukuba ngawaphi amasimi athatha ixesha elide ukugcwalisa, ashiyekileyo engenanto, kwaye kutheni iindwendwe zakho zishiya ifom nephepha lakho.
Iingxelo zeePolls -Phucula amava akho kwiwebhusayithi ngokubuza iindwendwe ukuba zifuna ntoni kwaye zithintela ntoni ukuba zingafezekiswa. Imibuzo ekujoliswe kuyo kubakhenkethi abathile naphi na kwiwebhu yakho nakwisiza esiphathwayo.
Uphando -Yakha uphando lwakho oluphendulayo usebenzisa umhleli olula. Qokelela iimpendulo ngexesha lokwenyani kuso nasiphi na isixhobo. Hambisa uphando lwakho usebenzisa amakhonkco ewebhu, ii-imeyile okanye umeme iindwendwe zakho ngaphambi nje kokuba bayishiye indawo yakho ukuze baveze inkcaso okanye inkxalabo yabo.
Abavavanyi boMsebenzisi -Fumana abathathi-nxaxheba kuphando lomsebenzisi kunye nokuvavanywa ngokuthe ngqo kwindawo yakho. Ukuqokelela iinkcukacha, iinkcukacha zonxibelelwano, kwaye unikele ngesipho ngokutshintshela uncedo lwabo.
Bhalisela iTyala leHotjar yasimahla
I-Hotjar icebisa le nkqubo yamanyathelo ali-9 okuphucula amava kunye nokuguqulwa kwabathengi.
Cwangcisa Imephu yobushushu kutrafikhi ephezulu kunye namaphepha aphezulu okufika.
Fumanisa 'abaqhubi' nge Iingxelo zeePolls kumaphepha aphezulu okufika kwezithuthi.
Survey Abasebenzisi bakho abakhoyo / abathengi nge-imeyile.
Cwangcisa ifanele Ukuchonga eyona miqobo ikhulu kwindawo yakho.
Misela Iingxelo zeePolls kumaphepha ezithintelo.
Misela Ubushushu kumaphepha ezithintelo.
ukusebenzisa Ukudlala kwakhona kweendwendwe ukuphinda udlale iiseshoni apho abaTyeleli bephuma khona kumaphepha ezithintelo.
Qesha kwakhona Abavavanyi boMsebenzisi ukutyhila abaqhubi nokujonga imiqobo.
Tyhila 'iiHooks' nge Ingxelo yoVavanyo kumaphepha akho empumelelo.
tags: Uhlalutyo lwefaneliIifanele zokuguqulaimephu yobushushuubushushuUbushushuishushuukurekhodwa komsebenzisiukurekhoda kweendwendweIsixhobo sophando lweendwendweUphando lweendwendwe